Shirka Golaha Amaanka Ee DDSI iyo Somaliland Oo Furmay - Cakaara News
Shirka Golaha Amaanka Ee DDSI iyo Somaliland Oo Furmay
Dire-Dawa(CN) Jamce, 18ka September 2015, Shirka golaha amaanka ee DDSI iyo Somaliland oo ay kasoo qaybgaleen mas'uuliyiinta ugu saraysa xukuumada DDSI oo ugu horeeyo Madaxwayne CMC, Birhane Gebre Kristos-Wasiiru dawlaha Wasaarada Arimaha Dibada ee JDFI, hay'adaha amniga ee heer deegaan iyo heer federal, 9ka gudoomiye gobol ee deegaanka, Wasiirka Wasaarada Arimaha Gudaha Somaliland iyo 8 badhisaab ayaa maanta galinkii danbe kafurmay hoolka shirarka ee Ras hutel oo kuyaala magaalada Dire Dawa.
Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo furay shirkan golaha amaanka ayaa sheegay in ujeedada shirkani tahay sii xoojinta amniga iyo kor uqaadida xidhiidhka arimaha siyaasada maadaama ay labada dhinac wadaagaan xuduud balaadhan.
Sidoo kale, Wasiirka Wasaarada Arimaha Gudaha Somaliland mudane Cali Maxamed Warancade oo isna dhankiisa kahadlay ayaa sheegay in xoojinta amnigu ay muhiim u tahay shacabwaynaha labada dhinac ayna tahay inay wada ilaashadaan xuduuda balaadhan. Isagoo intaa raaciyay inay dhankooda kago'antahay.
Hadaba iyadoo ma'uuliyiin kale oo madasha kahadashayna ay sii xoojiyeen xaaladaha kawada shaqaynta dhanka amaanka ee xuduuda ayuusan shirkani wali soo gabagaboobin. Waxaana lafilayaa in gunaanadka shirkani noqdo mid go'aamo wax ku ool ah oo taabagala la iskula qaato.